manomboka manaisotra ny iMac 24-inch iFixit Avy amin'ny mac aho
manomboka manaisotra ny iMac 24-inch iFixit
Efa mandray izy ireo. Ny zoma lasa teo ny voalohany 24-inch iMac, ary ahoana no mety hitranga raha tsy izany, omaly napetrak'ireo tovolahy avy amin'ny iFixit ilay visy biriky tao amin'ny iray tamin'izy ireo.
Izahay dia tsy manana afa-tsy ny fahatsapana voalohany ihany, satria haharitra andro fiasana maromaro ny fizotrany rehetra. Nasehon'izy ireo taminay ny sary X-ray, ary inona no hita tao ambanin'ilay faty. Ny ranomaso mampanantena, azo antoka.
Araka ny efa nambarantsika teo aloha, ny zoma lasa teo dia nanomboka tonga tany amin'ny toerana nalehany ny fandefasana voalohany avy amin'ny Apple an'ny marika vaovao sy miloko 24-inch iMac an'ny vanim-potoana Apple Silicon vaovao. Ary omaly alatsinainy dia tonga tany amin'ny tovolahy iFixit. Ka tsy naharitra ela akory izy ireo vao nahazo ny tanany.
IMac volomparasy avo lenta miaraka a CPU 8-core, GPU 8-core ary RAM 8 GB. Tsara ny manamarika fa ny atin'ity maodely ity dia tsy mitovy amin'ny atin'ny maodelin'ny base miaraka amina GPU 7-core, satria ireo masinina roa ireo dia samy manana ny rafi-pitenenan'izy ireo.
Ny base iMac dia manana mpankafy fantsona tokana ary heatsink, raha ny maodely GPU 8-core avo lenta kosa mpankafy roa ary fantsom-panafanana miaraka amin'ny filentehan'ny hafanana, noho izany ny ao anatin'ilay singa nesorina dia tsy mitovy amin'ny iMac misy GPU 7-core.
Fanaparitahana taratra X-ray sy casing
iFixit dia mandray taratra X foana alohan'ny fanaparitahana fitaovana iray.
Ny fanaparitahana dia manomboka amin'ny a radiography Ny tifitra feno antsipirihany sy ny taratra X dia mahaliana hatrany ny mijery azy ireo satria manome antsika topy maso ireo singa anatiny alohan'ny hanokafana ilay masinina. Misy takelaka vy roa lehibe ao anatiny ary RF pass-through ho an'ny fitaovana antena ao amin'ny sary famantarana Apple.
Ny iMac dia voaisy tombo-kase amin'ny lazain'ny iFixit hoe "adhesive iMac mahazatra", tsy dia lafo loatra ny manala azy noho ny adhesive ampiasain'ny Apple amin'ny fitaovana hafa toa ny iPad.
Koa satria eo alohan'ny iMac dia vera iray, tsy misy fizarana saoka eo anoloana manakana ny fidirana amin'ireo singa anatiny toy ny tamin'ny maodely teo aloha. Ny any ambany dia misy ny motherboard, ary misy mpankafy roa mitsoka ao anatiny. Ny fantsom-pahamendrehana varahina sy ny hafanana kely roa dia milentika mangatsiaka ny M1.
iFixit dia namaritra tamin'ny antsipiriany ireo singa motherboard, ao anatin'izany fahatsiarovana SK Hynix, fitehirizana tselatra Kioxia NAND ary maodely M1 SoC, Bluetooth / WiFi noforonin'i Apple, ary IC fitantanana herinaratra, ankoatra ireo singa hafa.
Misy "bokotra miafina»Miaraka amin'ny LED telo eo ambaniny, izay hanadihady anao avy eo hoe inona izany. iFixit koa dia mikasa ny hizara antsipirian'ny sensor momba ny Magic Keyboard Touch ID, ny mombamomba ny mpandahateny ary ny isa azo amboarina.
Ny ranomaso iFixit tsy ho vita raha tsy rahampitso, fa raha liana be ianao dia azonao atao ny manaraka azy mivantana amin'ny tranokalan'i iFixit, izay havaozina rehefa hita ny mampiavaka azy bebe kokoa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Solosaina Mac » iMac » manomboka manaisotra ny iMac 24-inch iFixit
Tsy hain'i Apple intsony ny fomba "mampifandray" ny mpanjifa amin'ny Apple Arcade ary manome serivisy mandritra ny herintaona